မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် 2020 အထိဒေါ်လာဘီလီယံအထိရောက်ရှိလိမ့်မည် RayHaber | raillynews
[24 / 03 / 2020] Izmir Metropolitan Mask စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်	35 Izmir
[24 / 03 / 2020] Coronary Virus ကြောင့်သမိုင်းဆိုင်ရာ Bursa Grand Bazaar ကိုပိတ်ထားခဲ့သည်	coronavirus
[23 / 03 / 2020] 23.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ - ၇ သေဆုံးမှု။	coronavirus
[23 / 03 / 2020] Fatih Terim Coronavirus စမ်းသပ်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်ခဲ့သည်။	coronavirus
[23 / 03 / 2020] Fahrettin Koca: ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်မျက်နှာကျက်မှထပ်မံအပိုဆုရရှိမည်ဖြစ်သည်။	coronavirus
ပင်မစာမျက်နှာလောကငါရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားထဲမှာ 2020 500 ဒေါ်လာဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု '' သည်အထိ
13 / 12 / 2014 လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားထဲမှာ 2020 500 ဒေါ်လာဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အထိထို့နောက်သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်: Frost & Sullivan 's, Hitachi ဥရောပ, Ltd. ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်းအရ; ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ 2020% ကနေ 56 မြို့ပြရေထဲမှာအသက်ရှင်လိမ့်မည်, 2025 မြို့, "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြီးစားမွို့" မှတက် 35 ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ပုံစံအဖြစ်မတ်မြို့ကြီးများ 2020 1.57 ထရီလီယံဒေါ်လာစျေးကွက် '' တစ်ဦးရောက်ရှိ, 2025 '' ta အရေအတွက်ကို 26 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမတ်မြို့ 'သို့မဟုတ်စျေးကွက်ထပ်မံကြီးထွားပါလိမ့်မယ်ရိုက်ယူခြင်း။ ဒါဟာကိုယ်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ် '' ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကမ္တာ့, Mega Trends ရင်ဆိုင်ရဖို့, မိမိသုတေသနပြုထုတ်ဖော်နှင့်အတူ s ကို, Frost & Sullivan ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု '' သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ Hitachi ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်ပေါ်အဆင့်မြင့်အခြေခံအဆောက်အအုံစနစ်များများအတွက်ခြားနားချက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ စစ်တမ်းအရ, သမိုင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ 50% '' မြို့ပြဒေသများမှာနေထိုင်မယ်။ ဒါကကိန်းဂဏန်း 2020 56 4,3% နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ဖို့နဲ့မြို့ပြလူဦးရေတွင်နေထိုင်တစ်ဘီလီယံကိုကလူကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ထ။ မြို့ရွာတို့အားအကြီးအကျယ်ရွှေ့ပြောင်း, ထင်ရှားနေသည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးစင်တာများ '' Mega City, '' ဖြစ်ရပ်ဆန်းသို့သူတို့ကိုငါမြင်၏။ တမြို့လုံးကန့်သတ်ဆင်ခြေဖုံးနှင့်အစ်မမြို့ကြီးများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ, Mega, Mega, Mega စင်္ကြံနှင့်အတူအမာခံမြို့လယ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်မည်ပင်ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ရပ်ကွက်အတွင်းပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်တိုးချဲ့၏ရလဒ်အဖြစ်ဤထူးခြားသောတိုးတက်မှုနှုန်း။ 2020 35 နှင့်ကမ္ဘာ '' တွင်းအပြီးပိုပြီးမြို့ကြီးများတစ်ကျိကျိတက်မြို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကြီးပွားသတည်း။ အာရှရှိစဉ်မှတက် 2025 18, Mega City, တွေအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ Mega City, ရဲ့ URL ၏ 72% အတွက်အာရှတယောက်တည်းတရုတ်ဖန်တီးလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်, ဥရောပရဲ့ပထမဆုံးအကြီးစားမြို့သုတေသန, Mega စီးတီး, 2025 8 ဘီလီယံရှိရာမှအမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြို့ကြီးများသတ်မှတ်မှနိမ့်ဆုံး 250 သန်းလူဦးရေနှင့်ဂျီဒီပီဒေါ်လာ။ အစ္စတန်ဘူလ်၌ဤအဓိပ်ပါယျနှင့်အတူပြီးသားဥရောပရဲ့ပထမဆုံးအကြီးစားတမြို့အဖြစ်အာရုံကိုဆွဲဆောင်။ မြို့ကြီးများစမတ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အတူတူအသိဉာဏ်နည်းပညာနှင့်အတူဤရွေ့ကားဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, '' စမတ်စီးတီး '' အယူအဆပေါ်ပေါက်မည်ဟုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းပညာကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။ တစျလောကလုံး 80 ဘီလီယံခန့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတထုတ်ကုန်မှတဆင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီ device ကိုစမတ်ထုတ်ကုန်နှင့် တွဲဖက်. တီထွင်ပါလိမ့်မည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောက်လှမ်းရေး, ထိရောက်မှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သော့ချက်ဒြပ်စင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စမတ်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောမြို့များကိုလူ့အသက်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်, ခြစ်ရာကနေတည်ဆောက်ထားခြင်းနှင့်စမတ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစပျိုးအသုံးပြုသောခံရဖို့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျော့နည်းစေလျက်ရှိသည်။ 2025 ရောက်ပါ '' t ကို 26 မြို့စမတ်မြို့နှင့်စမတ်မြို့ဈေးကွက် 1.57 ဒေါ်လာဘီလျံdönüşercek '' ။ mega ခေတ်ရေစီးကြောင်း, အပေးအယူတန်ဖိုးရှိ2ထရီလီယံဒေါ်လာအတွက်လူမှုရေးတီထွင်ဆန်းသစ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
မြို့ပြခေတ်ရေစီးကြောင်း၏လိုအပ်ချက်နှင့်အတူသက်ရောက်မှုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးယင်းရှေ့တန်းမှမှလူမှုရေးတီထွင်ဆန်းသစ်မှု၏အရေးပါမှုကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောကြောင်း: ကနျြးမာရေး '' 2020 ထရီလီယံဒေါ်လာကိုယ်စားလူမှုရေးတီထွင်ဆန်းသစ်မှု 'အတွက်စီးပွားရေး, စက်မှုလုပ်ငန်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အစိုးရ2အတွက်ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်စွမ်းအင်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကျန်းမာရေး Hitachi ဥရောပနိုင်ငံ Manager ကို Erman Akgun ၏ဒေသများ, "sürüdürülနိုင်မြို့ကြီးများ, Smart သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Smart ဇယားကွက်လိုအပ်ချက်များကိုဘို့ငါတို့အနာဂတ်စမတ်နှင့်အသိဉာဏ်စွမ်းအင်ရင်ဆိုင်ဖို့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်တွင်ဤအခွင့်အလမ်းများကို။ ဒီလိုအပ်ချက်ကိုမြင်လျှင်, ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်စတင်အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Hitachi, တူရကီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးစားခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အနာဂတ်အဖြစ်ကျနော်တို့အလျင်အမြန်အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။ high-speed ကိုရထားသည့်တိုက်ကြီးချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်း, နည်းပညာနှင့်မြို့ပြ၏ intertwining နှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ, ကာလအတွင်းဘီလီယံခန့် 2010 2020-500 အကြားဒေါ်လာတကမ္ဘာလုံး 's ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းစီမံကိန်းလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်, ရထားလမ်း၏ 70 တထောင်ကီလိုမီတာကြိုက်နှစ်သက်မှချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ high-speed ရထားရုံသာမကမြို့ကြီးများနှင့်နိုင်ငံအတူတကွတိုက်ကြီးချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ 2035 '' t ကိုဘေဂျင်းမှလန်ဒန်ကနေလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုကျေးဇူးတင်သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ပြန်လည်အနက်များအတွက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနကိုယ်စား Hitachi ဥရောပ, အနာဂတ်တွင်အသစ်သောလူမှုရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကပုံဖော်ပါလိမ့်မည်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, လူမှုရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှုလည်းအသစ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလွတ်လပ်စွာလုပ်မရနိုင်သည်ကိုပြသသည်။ အနာဂတ်မှာစွမ်းအင်ဝယ်လိုအားကြီးမားတဲ့ဖိအားဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်တွေ့ဆုံရန်စစ်တမ်း Hitachi ဥရောပ CEO ဖြစ်သူ Dieter Rennert "၏ရလဒ်များကိုအပေါ်မှတ်ချက်။ လွယ်ကူစွာများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ကြောင်း။ ပိုပြီးအထူးပြုစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများလိုအပ်ကြောင်း ပို. ပို. ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ။ ငါတို့သည်ဤသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်နှင့်လူမှုရေးတီထွင်ဆန်းသစ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုတည်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်များအတွက်စည်းလုံးညီညွတ်မှစတင်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်မီးရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 2012 496 နှစ်တွင်ဘီလီယံကိုယွမ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်
Topbas ကိန်းဂဏန်းများကိုပေး၏, အစ္စတန်ဘူလ်အပြည့်အဝ 35 ဒေါ်လာဘီလျံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
3 ။5ဘီလီယံအထိလေဆိပ်မက်ထရိုလိုင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်
1,8 ဘီလီယံခန့် liras မြန်နှုန်းရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့အတွက်သုံးစွဲလိမ့်မည်
အဆိုပါ 2019 3,5 သည်မြန်နှုန်းရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်နှစ်တာဘီလီယံပေါင်သုံးစွဲလိမ့်မည်ခုနှစ်တွင်
သံ Silk Road တူရကီ 's ဒေါ်လာဘီလျံတစ် 150 မရှိဘဲရောက်ရှိပါလိမ့်မည်
Gebze - Orhangazi - 5,17 ဒေါ်လာဘီလျံများအတွက် Izmir အဝေးပြေးစီမံကိန်းယခုအထိသုံးစွဲထားပြီး
အာဖရိကမှ 400 ဒေါ်လာဘီလျံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တူရကီကန်ထရိုက်တာများ
တရုတ်ကားလမ်းနှင့်ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဒီနှစ် 375 ဘီလီယံသုံးစွဲပါလိမ့်မယ်
ပူတင်: နိုင်ငံတော်ကုမ္ပဏီများမှ 50 ဒေါ်လာဘီလျံဆန်းသစ်တီထွင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့
ပြင်ပချေးငွေအကြွေးအမြင့်ဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ: 23.5 ဘီလီယံ
Hitachi ဥရောပ, Ltd.
MUSIAD Izmir ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေ့ဆုံ
YHT, ဒေသတွင်း, Marmaray နှင့်Başkentrayရထားဇယားနှင့်နာရီအပြောင်းအလဲများ
Kocaeli ရှိပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဌာနများရှိ ၀ န်ထမ်းများအားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Izmir Metropolitan Mask စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
RayHaber 24.03.2020 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုမှုသည် Izmir တွင်စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင် ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်
Izmir ရှိဆေးဝါးနှင့်ဆေးဆိုင် ၀ န်ထမ်းများအားအခမဲ့ရယူပါ
Coronary Virus ကြောင့်သမိုင်းဆိုင်ရာ Bursa Grand Bazaar ကိုပိတ်ထားခဲ့သည်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 24 2018 အိမ်ကြီးဓါတ်ရထားတွင်
23.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ - ၇ သေဆုံးမှု။
Fatih Terim Coronavirus စမ်းသပ်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်ခဲ့သည်။
Fahrettin Koca: ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်မျက်နှာကျက်မှထပ်မံအပိုဆုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
24: မတ်လ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - တံတားများနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း
တင်ဒါကြေငြာချက် - Alizancak အဆောက်အအုံများကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း Joinery နှင့် Denizli နှင့် Hilal အလုပ်သမားများ၏တန်းလျားအဆောက်အအုံများကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းပြုပြင်ခြင်း
ဗန် Iskele Left လိုင်းလမ်းပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်တင်ဒါရလဒ်
ကျောက်တုံး၌ကျင်းပသောကုန်ပစ္စည်းရထား၏စက်ယန္တရားသမား Mersin တွင်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်
မြို့တော်တွင်အငှားနှင့်မီနီဘတ်စ်များပိုးမ ၀ င်ပါ
Skoda မှကားများတွင် Coronavirus ဆန့်ကျင်ရေးအဓိကအချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုရှင်းလင်းခြင်း
Tesla Autopilot စနစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
LPG နှင့်Akaryakıta Raised